बिग्रेको सिस्टम सुधार्न जरुरी
विचार | 2018-06-18 14:38:00 |
काठमाडौं असार, ४–
यो सरकारले जनतामा आशा धेरै जगाएको छ । यस्ता आशा पूरा गर्न हामीसँग कति स्रोतसाधन छ त्यता पनि ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । हामीसँग साधनको सिमितता छ ।
जुनसुकै किसिमको विकासका लागि पनि राष्ट्र चलाउने ‘सिस्टम’ राम्रो हुनुपर्छ । सिस्टम ठीक छैन भने कुनै एक मन्त्री वा प्रधानमन्त्री असल वा क्षमतावान भएर पुग्दैन । अहिलेको सरकारले रेल र घरघरमा ग्यासका पाइप पुर्याउने कुरा होइन भत्केको सिस्टम राम्रो बनाउनेतिर लाग्नु पर्छ ।
सिस्टम भत्किँदा कसरी विकास चौपट हुन्छ भन्ने कुरा म एक उदाहरण दिएर बुझाउन चाहन्छु । हाम्रो देशको बजेटमा ३५–४० प्रतिशत विकासका लागि छुट्टयाइन्छ । यो अत्यन्त कम हो । यहि ३५– ४० प्रतिशत पनि खर्च हुँदैन । ५० प्रतिशत जति मात्रै खर्च हुन्छ । खर्च भएर पनि गुणस्तरीय काम हुँदैन । अर्थात हामीले विकासका नाममा गर्दैै आएको खर्चको ठूलो हिस्सा दूरुपयोग नै भइरहेको छ । सिस्टम भत्केको भनेको यहि हो । सरकारले सुधार गर्ने भनेको यहि हो ।
यो देशमा कानुन नमान्दा पनि हुन्छ । तोकेको समयमा काम नगर्दा पनि हुन्छ । सजायको भागीदार हुनु पर्दैन । गलत गर्ने्बित्तिकै सजायको भागीदार हुनु पर्ने अवस्था भयो भने जवाफदेहीता हुन्छ । मन्त्री, कर्मचारी, ठेकेदार सबैमा जब जवाफदेहीता भन्ने भावना उत्पन्न हुन्छ, तब मुलुक सिस्टममा चल्यो भन्ने बुझ्नु पर्छ । यहि भएर मैले जवाफदेही सरकार हुनुपर्छ भन्ने गरेको छु । कानुनविपरीतका काम गर्नेहरुले तुरुन्तै कानुनको दायरामा ल्याउने, कानुन कार्यान्वयन गराउने विधिको पनि हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने मानिसहरुले कानुनको सम्मान गर्छन् । कानुनी राज्य स्थापना हुन्छ । सुशासनका लागि यी दुई विषय धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् ।
बिग्रेको सिस्टम सुधार नगर्ने तर जनतामा आशा मात्रै जगाइराख्ने हो भने राजनीति प्रति नै जनताको विश्वास उठ्छ ।
एक वर्षमा सक्नु पर्ने काम पाँच वर्षमा पनि नसिध्याउने र त्यसो गर्दा पनि सजायको भागीदार नहुने परम्परा तोडिनु पर्छ । २१ औं शताब्दीमा अब मुलुक पुरानै ढर्राबाट चल्न सक्दैन । यस्तो बेथिति संरक्षण गर्नेहरुलाई कारबाही भएको आजसम्म मैले सुन्न पाएको छैन ।
यसकारण मुलुकलाई सुरुमा ट्रयाकमा ल्याउनु पर्छ । त्यसपछि गति दिने कुरा हुन्छ । मुलुक ट्रयाकमा छैन, अनि स्पिडको कुरा मात्रै गरेर होला त ?
राजसंस्था र हिन्दुत्व
नेपालमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना हुन सक्छ । हाम्रो पार्टीको एजेन्डा पनि यहि हो । धर्म्निरपेक्ष भन्ने शब्द नै नकारात्मक भाव दिने शब्द हो । यो शब्द नै राखिनु नहुने हो । हामीले सर्वधर्म सापेक्ष सनातन हिन्दु राष्ट्रको माग गरेका छौं । अर्थात सबै धर्मसापेक्ष मुलुक मागेका छौं । यसो भयो भने यो मुलुकको गरिमा धेरै माथि पुग्छ । विश्वभर डेढ अर्ब हिन्दु छन् । नेपाल हिन्दु राष्ट्र कायम हुँदा विश्वभरका हिन्दुहरुका लागि नेपाल आफैमा एक धाम बनिदिन्छ ।
नेपालमा राजसंस्था पनि पुनस्र्था्पित हुन सक्छ । ६२–६३ सालको जनआन्दोलनमा म पनि नेपालमै थिएँ । जनताले निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यको माग राखेका थिए । राजसंस्था नै अन्त्य हुनुपर्छ भनेका थिएनन् । धर्म्निरपेक्षता त कसैले सुनेका पनि थिएनन् । पछि अस्वभाविक रुपमा यो विषय प्रवेश गराइयो । जनताको चाहनाअनुसार भएको होइन ।
नेपाललाई बलियो बनाउन, राष्ट्रिय एकताका लागि, स्वाधीनताका लागि पनि नेपालमा राजसंस्था आवश्यक छ । हामीले सक्रिय राजतन्त्र होइन सेरेमोनियल राजसंस्थाको पक्षमा आवाज उठाउँदै आएका छौं ।
यो बेलामा संघीयता मुलुकलाई आवश्यक छैन भन्न सक्दिनँ ।संघीयता भने पनि विकेन्द्रीकरण भने पनि अधिकारको बाँडफाँड हो । केन्द्रको अधिकार जनताको घरदैलोसम्म पुर्याउने कुरा हो यो । यसकारण यो राम्रो पनि हुन सक्छ । एकात्मक शासन पद्धति भएको र विकेन्द्रीकृत वा संघीयता भएका मुलुकहरुको तुलना गर्ने हो भने नतिजा अनौठो आउँछन् । जहाँ संघीयता छ, त्यहाँ पनि विकास नभएको उदाहरण पनि छ । जहाँ एकात्मक शासन पद्धति छ त्यही विकास भएको उदाहरण पनि छ । अर्थात यो शासन पद्धति मात्रै सबै कुरा होइन । यो शासन पद्धतिलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ, त्यसका आधारमा मात्रै परिणाम तय हुन्छ ।
अहिले पहिले जुम्लामा कार्यालय सहयोगीका लागि भ्याकेन्सी खुल्दा काठमाडौंबाट फोन जान्थ्यो । मतलव त्यो हदसम्म अधिकार केन्द्रीकृत थियो । अब त्यस्तो अवस्था छैन । यति भन्दैमा संघीयताको परिणाम सधै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन । नराम्रै हुन्छ भनेर ठोकुवा गर्ने विषय पनि होइन । तर यो सघीयतापछिको असन्तुष्टि अहिले पनि छ । यसले कलहको बिउ रोपेको चाहिँ छ ।
कतिपय गाउँपालिकाको कार्यालय पुग्न भन्दा जनतालाई जिल्लाको सदरमुकाम जान सजिलो छ । ठूला आकारका गाउँपालिकाले सास्ती दिएको पनि छ । नगरपालिका घोषणा त गरिएको छ तर सुविधा कुनै छैन । जनताको थाप्लोमा कर मात्रै थोपरिएको छ ।
नेपाल विविधतापूर्ण मुलुक हो । आकारमा छिमेकीको तुलनामा सानो पनि छ । पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुंगाबीचको तरुल भनेका थिए । यो महत्वपूर्ण विषयलाई अहिले मजाक जस्तो बनाएर पनि व्याख्या गर्नेहरु पनि छन् ।
नेपाल चीन र भारतको बीचमा छ । यसकारण पनि हाम्रो भूराजनीति संवेदनशील नै छ । डिप्लोम्यासीमा सबैले आफ्नो स्वार्थ नै हेर्ने हो । हामीले पनि अरुलाई हानी नहुने गरी आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नु पर्छ । नेपालले स्वतन्त्र अस्तित्व भएको मुलुकका रुपमा स्थापित गर्न बेला बेला चुक्ने गरेको पनि देखिन्छ । भारतलाई खुसी नपारी नेपालमा केही पद प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने बेमतलवको विकृति प्रवेश गराइएको छ । यसो गर्ने अरु कोही नभएर हामी आफै हौं । यो विकृति हटाउन पहल गरिहाल्नु पर्छ ।
नेपालले आफ्ना निर्णयहरु आफैले गर्नु पर्छ । छिमेकीलाई हानी नगर्ने जुनसुकै कुराको निर्णय आफैले लिने हो । कहिले यता ढल्केजस्तो देखिने, कहिले उता ढल्केजस्तो देखिने प्रवृत्ति सदाको लागि बन्द गर्नु पर्छ ।
दक्षिणको भारतसँग हाम्रो बढी सम्पर्क छ । धेरै व्यवहार भारतसँगै हुने गरेको छ । तर भारतीय पक्षबाट कहिले नाकाबन्दी त कहिले नेपालीलाई गोली हानेर मार्नेसम्मको कर्म भइरहेको छ । अब युग सुहाउँदो छिमेक सम्बन्ध स्थापित गर्नु पर्छ । खुला सीमाले नेपाल र भारतकै सुरक्षामा खतरा उत्पन्न गरेको छ । यसलाई रेगुलेट गरिहाल्नु पर्छ । भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदा सचेत पनि हुनुपर्छ । सीमा विवाद अन्त्य गर्नु पर्छ ।
गर्ने काम नगर्ने अनि कहिले लम्पसावादी भनेर अरुलाई गाली गर्ने, कहिले आफै लम्पसार पर्न जाने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । (पूर्वमन्त्री तथा राप्रपाका महामन्त्री चन्दसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । आजको अमृतबजार साप्ताहिकमा खबर छ । जयन्त चन्द, महामन्त्री राप्रपा
रिसब गौतम काठमाडौं भदौ– दक्षिण एसिया तथा दक्षिण पूर्वी एसियाका मुलुकहरुलाई प्राविधिक...
निराश हुनुपर्ने अवस्था छैनः विद्यासुन्दर शाक्य, मेयर काठमाडौं महानगरपालिका
काठमाडौं जेठ, ७– तपाई जनताले चुनेको मेयर, तर तपाईसँग जनताले पहुँच नै पाएनन् भन्ने गुनासो छ ।...
उत्तरकोरियामा जनता खुसी देखिनँ: डा. सुरेन्द्र केसी, इतिहासविद्
काठमाडौं जेठ, १– सातौं शताब्दीदेखि नेपाल र चीनबीच आवागमन भइरहेको छ । म इतिहाँसको विद्यार्थी...